Ny mari-pahaizana voalohany amin'ny Galaxy Note 9 dia mampahafantatra antsika ny mombamomba azy | Androidsis
Rehefa mbola 5 volana mahery sisa handehanana mandra-pahatongan'ny fampisehoana ofisialy ny Galaxy Note 9, Ny fahamboniana phablet par eny an-tsena sy ny fitaovana voalohany nialoha ity sokajy ity dia efa niresaka nandritra ny herinandro maromaro izahay momba ny sasany amin'ireo pitsipitsony mety ahatongavan'ity terminal ity eny an-tsena. Ny tsaho farany navoakanay dia nilaza fa ny bateria dia mety hahatratra 4000 mAh.
Saingy aorian'ny famoahana ny mari-pahaizana Galaxy Note 9 voalohany, afaka mahafantatra bebe kokoa momba ny andiany manaraka an'ny Galaxy Note isika, terminal izay ny nomeraony dia SM-N960U ary nandalo an'i Geenbench, no "fanamafisana" ofisialy voalohany amin'ny sasany amin'ireo famaritana azy.
Raha mbola mihoatra ny 5 volana alohan'ny fampisehoana azy dia azo inoana kokoa fa ny fitsapana dia ny prototype, noho izany dia mihoatra lavitra noho izay azo atao mandritra ireo volana ireo, mandra-pahatongany miditra amin'ny dingana famokarana, ny sasany amin'ireo famaritana azy dia novaina. Voalohany indrindra, manaitra ny saina fa ity terminal ity dia avy amin'ny tanan'ny Android Oreo 8.1, ny kinova farany an'ny rafitra fiasa izay atolotry Google eo an-tsena ary vitsy ny mpanamboatra manolotra.
Faharoa, hamafisina fa ao anatiny, ho hitantsika ny Snapdragon 845, ary koa ny maodely Galaxy S9 sy Galaxy S9 + natao ho an'ny tsena amerikana, amerika atsimo ary aziatika. Ny maodely natokana ho an'i Eropa dia ho tantanan'ny fikirakira matanjaka indrindra an'ny Samsung ao amin'ny faritra Exynos izay hita ihany koa ao amin'ny kinova Eoropeana an'ny Galaxy S9 sy Galaxy S9 +.
Raha miresaka momba ny fahatsiarovana ilay fitaovana isika dia manaitra izany ampidiro RAM 6GB fotsiny, ny vola mitovy amin'ny omen'ny Galaxy S9 + antsika ankehitriny, noho izany azo inoana fa mety hitombo hatramin'ny 8 GB amin'ny endriny farany io, raha te-hanavaka ny tenany amin'ilay maodely kely kokoa tsy misy stilosy ny orinasa Koreana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny mari-pahaizana voalohany amin'ny Galaxy Note 9 dia mampahafantatra antsika ny mombamomba azy
Ny Huawei Enjoy 8 dia natomboka tany Sina ary ireo no mampiavaka azy